လူတစ်ယောက် ဟာ စေ နဂြိုဟ် စနေသက်ရောက်ထဲ ကို ရောက်နေပြီဆိုရ င်တော့ ဒါတွေကြုံရပါမယ် – Shwewiki.com
လူတစ်ယောက် ဟာ စေ နဂြိုဟ် စနေသက်ရောက်ထဲ ကို ရောက်နေပြီဆိုရ င်တော့ ဒါတွေကြုံရပါမယ်
March 15, 2020 By admin Knowledge
ဘဝ တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲတတ်သောနှစ် (သို့မဟုတ်) စနေသက်ရောက်
လူ တစ်ယောက်ဟာ စနေဂြိုဟ်စနေသက်ရောက်ထဲကို ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်ရစရာ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘဝ တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အထိ ကံကအပြောင်းအလဲများပါတယ်။ စနေဂြိုဟ်အကြောင်းမပြောခင် TV မှာလာတဲ့ “တန်ခိုးထွန်းလင်း စနေဂြိုဟ်မင်း” series ဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖူးကြမယ်ထင် ပါတယ်။
အဲဒီဇာတ်ကားထဲက လိုပါပဲ။စနေဂြိုဟ်ရဲ့ သဘောက အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတယ်။ မကောင်းတဲ့သူတွေ မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်ကို ခံစားရမယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အမြင်မှန်ရစေဖို့ အထောက်အကူပြုတယ်။ တရားသဘောအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းသဘောတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရမဲ့ ဂြိုဟ်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ …စနေဂြိုဟ်က ချစ်ခြင်းတွေရှိသလို မုန်းခြင်းတွေရှိပါလား?.. အောင်မြင်ခြင်းတွေ ရရှိတတ်သလို ရှုံးနိမ့်ခြင်းတွေလဲ ရှိပါလား? …
ကျန်းမာခြင်းနောက်ကွယ်မှာ ရောဂါဝေဒနာတွေကပ်ပါလာပါလား ဆိုတာကို ဒိဋ္ဌဓမ္မ မြင်အောင်ပြုမူတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ စနေဂြိုဟ်ဆိုရင် လူတော်တော်များများ ကြောက်ကြပါတယ်။ ကြောက်ရလောက်အောင်လဲ စနေဂြိုဟ်က ရိုက်ချက်ပြင်းပါတယ်။
စနေသက်ရောက်ထဲရောက်နေတဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စလေး စပြောရအောင်ဗျ။
ချစ်သူက မိမိကို စိတ်ကုန်သွားတတ်ပြီး လမ်းခွဲစကားတွေ ပြောလာတတ်ပါတယ်။
လက်ထပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားရင် မင်္ဂလာမဆောင်ရဘဲ နှစ်ဦးသဘောတူ လက်ထပ်လိုက်ရတာမျိုး၊ မင်္ဂလာဆွမ်းကပ်ရတာမျိုးနဲ့ပြီးသွားတတ်ပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အနေဝေးရာက စိတ်ချင်းပါ ဝေးသွားတာမျိုး ကြုံ ရတတ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းရှားနေတတ်တယ်။ ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေပဲ ဝန်းရံနေလိမ့်မယ်။
မိမိထက်ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့ သြဇာပေးတာ ဆရာလုပ်တာခံရတတ်ပါတယ်။
အုပ်စုဖွဲ့ ချောက်ချ ခြင်းမျိုး ခံရတတ်ပါတယ်။
အလုပ်စီးပွား ကံတွေကတော့ စနေသက်ရောက်ထဲ ရောက်လာရင်
စီးပွားပျက်တတ်ပါတယ်။ လုပ်လက်စအလုပ်တွေ ရပ်တန့်သွားတတ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းများ မသွားချင်တဲ့ ဒေသမျိုးကို ပြောင်းရွှေ့ခံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြုတ်တတ်တယ်။
အလုပ်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ငွေထပ်မထည့်နိုင်တော့တာမျိုးတွေလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
အောက်ဆိုဒ်ရှာသူများ ၊ တရားဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ စီးပွားလုပ်သူများ ထောင်တန်းရောက်တတ်ပါတယ်၊
ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုး ပေးပုံကတော့ ဒီလိုပါ။
ရောဂါဟောင်း ဝေဒနာဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
accident ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ရှနာ ဖြစ်လွယ်ပါတယ်..၊
ကိုယ်မဖြစ်ရင် ကိုယ့်မိသားစုထဲက အိမ်သားတစ်ဦး ကျန်းမာရေးညံ့သွားတတ်ပါတယ်။
ဆရာသင်ကြားတဲ့ အပေါ်မှာ နားမလည်မှုတွေများ နေတတ်ပါတယ်။
ကျက်ထားတာတွေ စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်ရင် မေ့နေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ စနေဂြိုဟ် စနေသက်ရောက်ဟာ လူအတော်အများများကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ စနေဂြိုဟ်က အဆိုးကြီးပဲ ကောင်းတာမရှိဘူးလား ..လို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
အဲလိုမေးလာရင် စနေဂြိုဟ်ကကောင်းတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးပါပဲလို့ ပြောရမှာပါ။ အဆိုးတွေ များလို့လားတော့ မသိဘူး….စနေသက်ရောက်ကို ဖြတ်သန်းပြီးရင် လူတွေ မာန်ကျိုးလာတယ်။
လူအောက်ကျို့ လာတယ်။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်တောင် ဘုရားဝတ်ပြုဖို့ မေ့နေတဲ့သူတွေ ပုတီးကြီးတကိုင်ကိုင်နဲ့ ဘုရားဖက်လာတတ်တယ်။ သံဝေဂဉာဏ်ရင့်သန်သူတွေ အသိထူး အမြင်ထူးတွေ ရလာတတ်ပါ။
အရင်ကထက် ကုသိုလ်တရားတွေ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်…၊ ကျရှုံးခဲ့တဲ့ အလုပ်စီးပွားတွေကြောင့် စိတ်ထိခိုက်မနေဘဲ….”လဲရင်ပြန်ထ ..ဒါဘဝပဲ” ကြွေးကြော် ကြိုးစားသူတွေ အောင်မြင်သွားတတ်တယ်။
ဒါကြောင့် စနေဂြိုဟ် စနေသက်ရောက်ထဲမှာ အားလျော့ လိုက်တဲ့သူတွေဆို နလန်ပြန်ထူဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး ။
ဘယ်လိုအခက်အခဲကြုံ ကြုံ ၊ ဘယ်လိုဒုက္ခတွေပဲရောက်ရောက် အရှုံးမပေးစေချင်ပါဘူး….။ စနေဂြိုဟ်ဟာ ဒုက္ခတွေပေးပြီးရင် သုခတွေလာတတ်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး လေပြေညင်းလာတတ်သလိုပါပဲ….။
မုန်တိုင်းကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်….။ အထူးသဖြင့် စနေဂြိုဟ် စနေသက်ရောက်ထဲမှာ ၄ကြွင်း သမားတွေနဲ့ သုညကြွင်းသမားတွေဟာ အခြားအကြွင်းဖွားတွေထက် ကံပိုမိုညံ့တတ်ပါတယ်။ ထိုအကြွင်းဖွားတွေက စနေသက်ရောက်ထဲမှာ ကံပိုညံ့တတ်လို့ပါ။
(အကြွင်းဖွားဆိုသည်မှာ …မြန်မာမွေး ခုနှစ်ကို ရနဲ့စားပြီး ရလာတဲ့ အကြွင်းကို ဆိုလိုတာပါ)
စနေသက်ရောက်ထဲကို ရောက်နေတဲ့ နေ့သားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားတွေကတော့…
စနေ သား သမီးများ အသက် ၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃ ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ နှစ်များ
ကြာသပတေး သားသမီးများ အသက် ၈ ၁၆ ၂၄ ၃၂ ၄၀ ၄၈ ၅၆ ၆၄ ၇၂ ၈၀ ၈၈ နှစ်များ
ရာဟု သားသမီးများ အသက် ၇ ၁၅ ၂၃ ၃၁ ၃၉ ၄၇ ၅၅ ၆၃ ၇၁ ၇၉ ၈၇ နှစ်များ
သောကြာ သားသမီးများ အသက် ၆ ၁၄ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ ၇၈ ၈၆ နှစ်များ
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အသက် ၅ ၁၃ ၂၁ ၂၉ ၃၇ ၄၅ ၅၃ ၆၁ ၆၉ ၇၇ ၈၅ နှစ်များ
တနင်္လာ သားသမီးများ အသက် ၄ ၁၂ ၂၀ ၂၈ ၃၆ ၄၄ ၅၂ ၆၀ ၆၈ ၇၆ ၈၄ နှစ်များ
ုအင်္ဂါ သားသမီးများ အသက် ၃ ၁၁ ၁၉ ၂၇ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၅၉ ၆၇ ၇၅ ၈၃ နှစ်များ
ုဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး အသက် ၂ ၁၀ ၁၈ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀ ၅၈ ၆၆ ၇၄ ၈၂ နှစ်များ
သည် စနေသက်ရောက်စနေဂြိုဟ် ထဲ ရောက်နေတဲ့ နှစ်တွေပါပဲ။
မိမိဟာ ရဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားဟာ စနေသက်ရောက်ထဲသာရောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ … အောက်ပါယတြာတွေကို လုပ်ပေးထားခြင်းဖြင့် စနေဂြိုဟ်ရဲ့ အဆိုးတွေမှ သက်သာခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။
စနေညနေစောင်းမှာ မိမိ၏ အဝတ်အထည်ဟောင်း တစ်စုံကို ငါ့ဒဏ်နင်ခံဆိုပြီး စီးနေတဲ့ ရေမှာ မျှောပစ်လိုက်ပါ။
စနေညနေစောင်းမှာ နှင်းဆီပန်း (၇)ပွင့်ကို နို့ဆီဗူးခွံထဲမှာ ထည့်ပြီး “ငါ့ဒဏ်နင်ခံ “ဟု ပြော၍ ထုထောင်းကာ စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
ဘာနေ့သားပဲ ဖြစ်ဖြစ် စနေနေ့မှာ သက်သတ်လွတ်စားပါ။
အိုးတစ်လုံးသဲအပြည့်ထည့်ပါ….ထိုသဲအိုးပေါ်ကို အခွံချွတ်ပြီးသား အုန်းသီးတင်ပါ။ အုန်းသီးတွင် “အရဟံ “ဂုဏ်တော်ကို Marker pen နဲ့ရေးပါ…
ထိုနောက် ထိုအုန်းသီးတင်ထားသော သဲအိုးကို ဘုရားခန်းတစ်နေရာမှာ ခုံတစ်လုံးနှင့် တင်ထားလိုက်ပါ။ တစ်နေ့တကြိမ် အုန်းသီးပေါ် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် တင်ထွန်းပြီး (အရဟံ သိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိ အရဟံ) ပုတီးတစ်လုံးချ၍ တစ်နေ့ ပုတီး တစ်ပတ် စိတ်ပါ ။ နေ့စဉ်စိပ်ပေးပါ…
ဒီလောက်ဆို စနေသက်ရောက်ထဲရောက်နေတဲ့ ရရက်သားသမီးများအတွက် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အကူအညီဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။.…အသေးစိပ်သိချင်ရင်တော့ နီးစပ်ရာဆရာတွေဆီမှာ အကြံယူမေးမြန်းစေချင်ပါတယ်။
ငြိမ်းအေးလူ (ဗေဒင်သုတေသီ) V ibe r O n l y( 09775555695)
စင်ကာ ပူအစိုးရ က မြန်မာအ ပါအဝင်အရှေ့တောင်အာ ရှနိုင်ငံေ တွ ကို ခရီးသွားခွင့်ဆိုင်စည်းမျဉ်းသစ်တစ်ရပ်ယနေ့ညနေထုတ်ပြန်
ကူးစ က်တတ်သောေ ရာဂါ များ ကြိုတင်ကာကွယ် ဖို့ ဒန့်သလွန် ကို စားကြ စို့